”Deni isaga ayaa qoray heshiiska uu markii dambe diidey!” – MW Farmaajo oo ka hadlay tillaabada xigta ee la qaadi doono | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Deni isaga ayaa qoray heshiiska uu markii dambe diidey!” – MW Farmaajo...
”Deni isaga ayaa qoray heshiiska uu markii dambe diidey!” – MW Farmaajo oo ka hadlay tillaabada xigta ee la qaadi doono
(Muqdisho) 06 Feb 2021 – MW Maxamed Farmaajo oo khudbad ka jeediyey Baarlamanka gaar ahaan Aqalka Hoose ayaa ka hadlay marxaladihii ugu dambeeyey ee dalka khaasatan arrimaha la isku mari la’yahay ee doorashada, isagoo maamullada qaar ku eedeeyey inay wax kasta diideen.
”Waxaan ku iri baxa wixii aad doontaan soo qorta. Heshiiska waxaa qoray Siciid Deni, markii uu keenayna waxaan iri armay hadhow wax kasoo noqdaan. Waxay yiraahdeen taasi ma dhacaysee Baarlamanka hor gee,” ayuu yiri MW Farmaajo oo sheegay inay 5 jeer tanaasuleen.
”Arrimaha doorashada waxaa ku jira faragelin shisheeye, qofna gaar u sheegi maayo, balse waa arrin jirta,” ayuu daba dhigay.
”Shirkii ugu dambeeyey ee Samareeb waxaa galay hakad, balse rajo ayaa jirta oo waxaan ku ballanay in horay wax loo wado,” ayuu raaciyey isagoo Puntland iyo Jubbaland ku eedeeyey inay diideen heshiiska.
Waxaa aad loogu dheg taagayaa waxa dhici doona kaddib marka uu dhamaado waqtiga nidaamka haatan jira oo ku eg 8-da Febraayo.
”Waxaan diyaar u nahay doorasho min Juun ilaa shalay, waana loo baahan yahay in aan doorasho galno, in kastoo aan firaaq dastuuri ah la geli doonin.” ayuu yiri MW Farmaajo oo muujiyey in uu joogayo inta laga dooranayo nidaamka xiga.
MW Farmaajo ayaa sheegay in haddii la heshiin waayo ay Baarlamanka kusoo celinayaan wax kasta, iyadoo nuxurka warka Madaxwaynaha ay ugu wayn yihiin 1 – Gardhigasho ku aaddan maamullada qaar, 2 – In shir kale la qabanayo iyo 3 – In uu xilka sii haynayo inta doorasho laga qabanayo.
Previous articleTOOS: ”Baarlamanku wuu sii shaqaynayaa inta laga dooranayo midkii bedeli lahaa!” – MW Farmaajo oo muujiyey in….LIVE
Next articleTOOS u daawo: Aston Villa vs Arsenal – LIVE (Shaxda Sugan)